ब्ल्याक होल नजिकै नाचिरहेको अनौठो नयाँ तारा ? – Nepalpostkhabar
ब्ल्याक होल नजिकै नाचिरहेको अनौठो नयाँ तारा ?
Hemant KC । १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०७:४६ मा प्रकाशित
वासिंटन ः आकाशगंगाको केन्द्रमा ब्ल्याक होललाई एउटा ताराले परिक्रमा गरिरहेकोबारे खगोलविद्हरुले पहिलो पटक अवलोकन गरेका छन् ।
जुन तारा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भविष्यवाणी गरेको सापेक्षतावादको सिद्धान्तको लयमा अनुरुप नाचिरहेको बताइएको छ । एस्ट्रोनोमी एन्ड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नलमा बिहीबार यसबारे वृहद अध्ययन प्रकाशित भएको छ । खगोलविद्हरुले चिलीको अटाकामा मरुभूमिबाट विशाल टेलिस्कोपको माध्यमबाट उक्त ताराको अवलोकन गरेका थिए । जसको कक्षको आकार सुनौलो धातु वा ब्याच जस्तो देखिने उनीहरुले बताएका छन् ।
आइज्याक न्युटनको गुरुत्वआकर्षणको सिद्धान्त अनुसार उक्त ताराको आकार अण्डाकार जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थमा यो ‘रोसेट’ जस्तो भएको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । साथै आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्त निकट रहेको बताइन्छ ।
यस अध्ययनका प्रमुख अध्येता रेनहार्ड गेन्जेलले भनेका छन्, यो प्रभाव सूर्यको चारैतिर बुध ग्रहको कक्षमा देखिएको सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्तमा पहिलो प्रमाण हो । ब्ल्याक होललाई परिक्रमा गरेको यो सबैभन्दा नजिकको तारा भएको पनि बताइएको छ । साथै सूर्यभन्दा २६ हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । उक्त तारालाई लिएर खगोलविद्हरुले थप अध्ययनको नयाँ अवसरको रुपमा लिएका छन् ।